China Products gbakọta Manufacturer na Supplier | Meste
Mestech na-enye ndị ahịa ngwaahịa ọrụ ngwaahịa na ngwaahịa eletrọniki, ngwa eletriki, nchekwa na ngwaahịa dijitalụ, gụnyere nrụpụta akụkụ, ịzụrụ, nzukọ ngwaahịa mechara, ule, nkwakọ ngwaahịa na mbupu.
N'ịbụ ndị nyere akụkụ plastik, ihe ndị e ji ígwè mee maka ndị ahịa, MESTECH na-enyekwa ọrụ nchịkọta ngwaahịa maka ndị ahịa, ndị na-enweghị ụlọ ọrụ nke ha ma ọ bụ na ha enweghị ike ịchọta ndị nrụpụta mpaghara nwere ọnụ ahịa asọmpi ma ọ bụ teknụzụ ruru eru. Nke a bụ otu akụkụ nke ọrụ anyị niile.
Gịnị bụ ngwaahịa gbakọta
Gbakọta bụ usoro nke ijikọ akụkụ ndị arụpụtara n'ime ngwaọrụ zuru ezu, igwe, usoro, ma ọ bụ otu igwe .Ọ bụ ihe dị mkpa iji nweta ngwaahịa nwere ọrụ ụfọdụ.
Embgbakọta bụ isi usoro na dum n'ichepụta usoro. Ọ gụnyere usoro ihe omume, dị ka ịkọwapụta ebumnuche atụmatụ, nhazi usoro, nzukọ mmepụta, nkesa ihe, nhazi ndị ọrụ, nzukọ ngwaahịa, ule na nkwakọ ngwaahịa. Ebumnuche bụ inweta ngwaahịa ga-ezute onye nrụpụtara tupu akọwapụtara ya, ogo ya na mkpa ya.
Nchịkọta ngwaahịa bụ ọrụ injinia usoro, nke nwere usoro nhazi na usoro ọrụ ọrụ aka, gụnyere:
2. Ego nke ihe eji eme ihe
3.Material zuo, nchekwa
4.Standard Operating Usoro
5. Ọkachamara na ọzụzụ
6.Quality nnyocha na mmesi obi ike
7.Ndabere na eletrik
8.Fitting na ule
Ngwaahịa na-agbakọta usoro
Usoro mgbakọ ngwaahịa nke Mestech
Ngwaahịa anyị na-ezukọ maka ndị ahịa anyị
Nnyocha na akara
MESTECH enyela ọrụ ọtụtụ ndị ahịa na-ezukọta. Anyị enwetawo ahụmịhe bara ụba na mpaghara a ruo ọtụtụ afọ. Anyị ji obi anyị niile na-enye gị otu-nkwụsị ọrụ si ngwaahịa imewe, akụkụ nhazi okokụre ngwaahịa nzukọ. Ndị nwere mkpa na ajụjụ biko gwa anyị na kọntaktị na-esonụ.
Nke gara aga: ABS resin injection ịkpụzi
Osote: Ebu imewe
Chikọtanu Products Assembly
Kọmputa Ngwa Mgbakọ Kọmputa
Ahịa Eletrọniki Ndị Ahịa
Ezinaụlọ Ngwaahịa Assembly
Ekwentị Mgbakọ Ngwaahịa Ekwentị
Plastic electroplating na agụụ plating
Ugboro abụọ ọgwụ ike ngwá ọrụ ụlọ
Ugboro abụọ-ọgwụ waterproof plastic ikpe nke int ...
Stackable plastic nchekwa igbe injection ịkpụzi